Ndezvipi zvakakwirira zveP PR zvingakubatsira iwe kuvaka backlinks?
Pasinei nekutsvaga kushandiswa kwegorgorithm kuchinja, backlinks inoramba yakakosha kune yewebsite rankings. Ichiri kukosha kuumba backlinks panzvimbo dzakakwirira dzeP PR kuti uwedzere nzvimbo yako yepaiti uye kusimbisa iwepo iwe pawebhu. Iye zvino, Google maitiro algorithm anoshumira zvakajeka - yakakwirira nhamba yehutano hwemashure hunoendesa kunzvimbo yako, iyo inonyanya kukosha peji yako yewebhu.
Zvisinei, unoda backlinks kwete kungovandudza nzvimbo yako yekutsvaga injini yekugadzirisa. Vanobatsira kuwedzera mararamiro enyu uye kuunza maronda akawanda emhando kubva kune nzvimbo dzakakosha.
Kuti uve nehutano hwakanaka, haufaniri kungoshanda zvakaoma kuti ugadzire hutsva hutsva hunoenda kune yako yepaiti asi zvakare kutevera zvisungo iwe usingawanzoshandisa kuwana uye kubvisa zvisungo zvinogona kukuvadza bhizinesi rako.
Muchikamu chino, tichakurukura maitiro ekuwana maP PR zvivakwa zvekuvakira zvizere kumashure. Uyezve, tichakurukura kuti tingagadzira sei mazano ekubatanidza maiti uye kubvisa marangaridzo anovhiringidza kubva kwaari.
Nzira yekuwana sei zvakanakisisa PR PR backlinks yewebsite yako?
Unofanirwa kutanga nokutarisa pamakwikwi emotokari ako. Zvese zvaunoda pane zvakaderera zvehutano chizvarwa ndechokutsvaga yewebhu nekuda kwemashoko ako ekutsvaga uye kuongorora kuti mawebsite akaita sepamusoro-soro.
Kuongorora nzvimbo dzepamusoro dzemakwikwi mamwe emakwikwi emakethe, unogona kushandisa Semalt Web Analyzer kana Shanduro yakafanana yeWebhu. Kana wangoona webhusiro yepamusoro inotaura nezvekubatana kwemashoko, unofanidza kuedza kudzokorora hutano uhwu uye kuwana mutengesi unokosha kune yako nzvimbo.
Sekutonga, zvakanaka shure shure kunobva kuhutano uye zvinhu zvakaratidzwa kana mabasa. Ndicho chikonzero iwe unofanirwawo kukurudzira bhizinesi rako pane zvekugarisana nevamwe uye kusimudza nhamba yevimbika kune vashandisi vemagetsi. Kushandisa purogiramu chaiyo ye software, unogona kutarisa zvinotaurwa nehuni yako pane zvemagariro evanhu uye shandura mazwi aya ne-backlinks.
Kazhinji kutaura, backlinks inoshanda senhare yebhuku rebhundaneti uye zviratidzo zvezita. Ndicho chikonzero kana iwe ukapa mikana yako yevatengi vane michina yepamhando uye mazano pamwe chete nehuwandu hunobatsira, vanhu vachataura pamusoro pako uye vanobatanidza newebsite yako. Somugumisiro, iwe uchawana zvakawanda zve organic organic juice uye maonero akanaka maitiro.
Ungachengetedza sei nzvimbo yako yepaIndaneti mukurumbira?
Kana iwe uchida kugara uchitenderera uye uchitungamira, iwe unoda kutarisa mukurumbira wako wepaIndaneti. Kana uine maitiro asina kunaka pamusoro pebhizimisi rako pawebhu, isa nguva yako nekuedza kugadzirisa chinetso chevatengi panzvimbo yekuedza kubvisa izvi zvisina kunaka. Iwe unofanirwa kupindura kune zvese zvinokuvadza zvisina kunaka uye ona kuti chii chakakanganisika. Kana dambudziko rakanga riri kubva kumativi ako, unofanirwa kurivandudza uye kupa mutengi ane tsananguro yakakura kana mubhadharo.
Sekutonga, vatengi vasina kugutsikana vanochinja pfungwa dzavo mushure mezvo uye vanovandudza maitiro avo, kugoverana zvawakaita uye kuchinja mamiriro ezvinhu akaipa mukunaka.
Ndicho chikonzero iwe unoda kushanda zvakaoma kugutsa vatengi panzvimbo yekuvaka masangano. Izvo zvakanyanya kuvimbika kune vashandisi vemashandisi yako, iwe unowedzera zvakanyanya kumashure backlinks unogona kuwana Source .